WENA Wawungenzenjani: Ngithole eselobolile ukuthi unezingane azifihlile | News24
WENA Wawungenzenjani: Ngithole eselobolile ukuthi unezingane azifihlile
eThekwini - Mhleli othandekayo nabafundi bakho, ngicela ningeluleke ngale nkinga.
Ngibuhlungu emoyeni wami futhi ngizizwa ngiyisilima ngendlela exakile. Ngineminyaka emine ngithandana nalo bhuti futhi konke kuhamba kahle (bengicabanga kanjalo).
Ngonyaka wethu wesithathu wangimangaza ngokuthi ayovela ekhaya, walobola, kwambeswa kwakuhle kwanjeyaya. Kwangithokozisa kakhulu akwenza ngoba wabonisa ukwethembeka kimi ngokwenza lokhu ayekusho sisaqala ukuthandana (ukuthi ufuna ukungenza unkosikazi).
Inkinga iqala kulo nyaka, ngisanda kuthola ukuthi unezingane ezimbili angangitshela ngazo futhi nakubo abazazi.
Indlela anempatho nothando ngayo, ngivele ngadideka ukuthi kungani angifihlele ngalezi zingane.
Esechaza, wathi kimi wawatshela lawa mantombazane esathandana nawo ukuthi akafune ngane, kodwa amitha, ngoba ayecabanga ukuthi azomubamba ngezingane manje akukho azokwenza ngoba wawacacisela kahle esathandana nawo.
Okungiphatha kaabi wukuthi, noma ngabe kunjalo, sezikhona izingane, ngeke ajezise igazi lakhe ngenxa yezintombi.
Uma ekwazi ukungifihlela ngalokhu, ngizokwenzenjani ngalesi simo ngoba anginankinga mina ngezingane zakhe kodwa wacasuka kabi ngesikhathi ngibatshela emzini ukuthi unezingane futhi akafuni lutho elimhlanganisa nazo nomama bazo.